बच्चाको उचाईँ नबढेर चिन्तित हुनुन्छ? यदि त्यस्तो हो भने खुवाउनुस् यहा भनिएका कुराहरु
६. बच्चाको तौल र हाइटबारे जानकारी लिइराख्नुस् । समय–समयमा चिकित्सकलाई देखाउनुस् । यदि बच्चाको विकासमा कुनै समस्या छ भने सुरुमै थाहा पाउँदा नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ । -एजेन्सी